II-COOKIES ezikhanyayo - eBirubi Beach, e-Anna Bay - I-Airbnb
II-COOKIES ezikhanyayo - eBirubi Beach, e-Anna Bay
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguGreg And Sue
UGreg And Sue yi-Superhost
IBirubi Beach ikumgama wemizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo. Kwakhona uza kuhamba imizuzu eyi- ukuya ezivenkileni, e-Tavern nakwiivenkile zokutyela. Kwindawo yemoto esesitratweni. Indawo yokuhlala yesitudiyo iquka ibhedi enkulu, ikhitshi elincinci, ifriji namagumbi okuhlambela. Indawo yokuhlala, indawo yokuphumla kunye neTV.
Istudiyo sisakhiwo esahlukileyo ngasemva kwikhaya lethu elinokungena kweendwendwe imini nobusuku. Ilungele iindwendwe ezihlala kunye nezibini.
Iindwendwe zinengenelo yolwazi lwethu lwasekuhlaleni ukuze ziqinisekise ukuba uyazonwabela zonke izinto ezifumaneka ePort Stephens.
Istudiyo yindawo efanelekileyo yokuhlala ukuze ubuke iPort Stephens isembindini wayo yonke imimandla kunye kufuphi nolwandle.
Ishawa engaphandle - amanzi ashushu nabandayo ayafumaneka.
Kukwathi cwaka nokulala kwasekuseni e.
Inikezelwe iketile, i-toaster, i-microwave, ipani yokufraya yombane kunye nomatshini wokomisa iinwele.
Inyama eyojiweyo eyojiweyo ephandle nayo iyafumaneka ukuze uyisebenzise.
Umgama olula wokuhamba ukuya kwi-Birubi SLSC kunye ne-Crest Cafe ukuze ubone kakuhle uLwandlekazi LwePasifiki kunye neekhilomitha eziyi-32 zolwandle olungaphazamisekiyo ukuze wonwabele isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye ikofu nje. ICrest yindawo enelayisensi.
Kulula ukuqhuba (yonke imizuzu eyi-15) ukuya eNelson Bay (eMarina, kwiivenkile zokutyela, kwiivenkile zeBoutique), eShoal Bay, eFingal Bay, kwiziko lokuthenga laseSalamander Bay kunye nezinye iindawo ezinomtsalane.
Umbuki zindwendwe ngu- Greg And Sue
Both Sue and myself are retired and aged in our late 60,s.
Have travelled around most parts of Australia and overseas (mainly Europe).
We have 4 children and 9 grandchildren.
We love water activities and this beautiful area.
Mna noSue sithathe umhlala-phantsi. Sizama ukuba iindwendwe zethu zihlale ziyimfihlo size sihlale singekho endleleni yakho kodwa siyakuvuyela ukuthetha neendwendwe xa sisekhaya kwindawo yethu entle. Emva kokuthetha loo nto, sinqwenela ukuba uhlale ePort Stephens ngaphandle kweengxaki ibe yinto entle omele uyikhumbule. Ngoko nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi ukuba unombuzo okanye umbuzo.
Mna noSue sithathe umhlala-phantsi. Sizama ukuba iindwendwe zethu zihlale ziyimfihlo size sihlale singekho endleleni yakho kodwa siyakuvuyela ukuthetha neendwendwe xa sisekhaya kwi…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6535-6
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Anna Bay